Nyefee Ndi ana-akpo si gam akporo ka Nokia na 1 Pịa
Ọ bụ yiri ka ọtụtụ gam akporo ọrụ nwekwara ike ịdị na a Nokia ekwentị. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ha, ma ugbu a chọrọ nyefee kọntaktị site na gị Android ekwentị gaa na Nokia otu, ị pụrụ iche eju anya. Na abụọ dị iche iche sistem, olee otú ị pụrụ ịgụcha kọntaktị transfer? Ọ bụrụ na niile kọntaktị na-echekwa na kaadị SIM, i nwere ike dị Ịtinye kaadị SIM na gị Nokia. Otú ọ dị, gịnị ma ọ bụrụ na kọntaktị na-na Android ebe nchekwa ekwentị? N'ụzọ doro anya, na iji kọmputa ede kọntaktị otu otu na gị Nokia ekwentị na-adịghị mma.
Na nke a, m na-ahọrọ ịme ka ị a ekwentị transfer software. Ọ bụ Wondershare MobileTrans, tumadi iji nyere aka na ị nyefee data n'etiti igwe na mbadamba na-agba ọsọ Android Symbian na iOS. Na ya aka, ị nwere ike nyefee kọntaktị site na Android ka Nokia dị nnọọ na 1 Pịa. Ọ bụghị nanị na Nyefe kọntaktsị na Android ekwentị, ma mbipụta ndị na-akaụntụ, dị ka Google, ka Nokia ekwentị. E wezụga na, na kọntaktị depụtaghachiri juputara ozi, gụnyere ụlọ ọrụ aha, Job na aha ma email adreesị.
Download software ịkwaga kọntaktị site na Android ka Nokia.
Cheta na: Na Wondershare MobileTrans, ị nwere ike nyefee kọntaktị site na Android ekwentị Nokia na ekwentị na-agba ọsọ Symbian 40/60 / ^ 3.
Wondershare MobileTrans - 1-Pịa na ekwentị ekwentị Nyefee
1-Click ekwentị Nyefee, 100% Nchekwa na n'ihe ize ndụ-free
Nyefee na kọntaktị site na Android ka Android
Ibufee ọdịnaya site na iPhone ka iPhone
Nkwado iOS, Android, WinPhone na Symbian
Ndabere ekwentị data na kọmputa
Weghachi si na nkwado ndabere na Lossless Ogo
Na-adịgide adịgide Ihichapu Your Old akporo ekwentị
Nzọụkwụ 1. Gbaa ndị software na Windows PC
Na-agba ọsọ a software na Windows PC mgbe ị rụchaa echichi.
Cheta na: Ị ga-wụnye iTunes na PC mgbe ị na-ekpebi nyefee data na site na iPhone / iPod / iPad.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị android na ekwentị Nokia na Windows PC
Plọg n'ime USB Gịnị jikọọ gị Nokia na gam akporo igwe ka PC na-agba ọsọ Windows Operating System. Mgbe ahụrụ, gị Android ekwentị ga-emere na ekpe, na Nokia ekwentị na nri.
Site uhuruchi Doro Anya data tupu oyiri, ị nwere ike wepụ niile ugbu a kọntaktsị na ekwentị Nokia tupu kọntaktị nyefe.
Cheta na: banye na ihe ndekọ na gị Android ekwentị mgbe ị na-eme atụmatụ nyefee kọntaktsị na ha ka ha Nokia ekwentị.
Mgbe ị chọrọ nyefee kọntaktị site Nokia ka Android, ị nwere ike pịa tụgharịa, ma na-agbaso nzọụkwụ ọzọ.
Nzọụkwụ 3. Copy kọntaktị site na Android ka Nokia
Ugbu a, na-amalite mbupụ kọntaktị site na Android ka Nokia ekwentị site na ịpị Malite Detuo. Nke a na-elu a dialog, na nke ọganihu mmanya na-ahụ ị pasent nke kọntaktị nyefe. Mgbe kọntaktị transfer-agwụ, pịa OK.
Otú nyefee Data si gam akporo ka Android
CopyTrans Manager - Nyefee Music ka iPod / iPhone / iPad enweghị iTunes
Otú nyefee Windows ka A New Draịvụ
> Resource> Nyefee> Nyefee Ndi ana-akpo si gam akporo ka Nokia na 1 Pịa